आज एकै दिन १ सय २ जनाले जिते काेराेना, निकाे हुनेकाे संख्या ४ सय ६७
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि किराँती र तिवारीका पार्टीको दर्ता स्वतः खारेज
सभामुखले बैठक सुरु गर्न ढिलाइ गरेपछि संसद् भवनबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भने– हामी अब ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्केका छौँ
प्रचण्डको षडयन्त्र र माधवको कुण्ठा पराजित
सुर्य चिन्ह प्रधानमन्त्री ओलीलाई
ऋषि कट्टेलले जिते मुद्दा, ओली-प्रचण्डको नेकपा खारेज
विराटनगरमा पनि आजदेखि ६५ वर्षमाथिकालाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइँदै
प्रतिनिधिसभामा नेकपाका दुवै समूह सत्तापक्षकै सिटमा बस्ने
ढुक्क भएर खोप लगाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
संसद बैठक सुरु हुनुअघि प्रचण्ड र माधव नेपालले भेटे सभामुख
9 months अगाडि
काठमाडाैं, २५ जेठ-नेपालमा आज एकै दिन १ सय २ कोभिड–१९ का सङ्क्रमित उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै अहिलेसम्म ४ सय ६७ जनाले कोभिड–१९ लाई जितेका छन् ।
कोभिड–१९ का सङ्क्रमित दिनहुँ बढिरहे पनि निको भएर घर फर्कनेका सङ्ख्या पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । शनिबार ३२ जनाको कोभिड–१९ जितेर घर फर्केका थिए भने त्यसअघि शुक्रबार एकै दिन ४३ जनाले सङ्क्रमण जितेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले आइतबार विभिन्न अस्पतालबाट १ सय २ जना डिस्चार्ज भएका जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. देवकोटाले आज डिस्चार्जमध्ये दुई महिला र १ सय पुरुष रहेको बताए । अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या ४ सय ६७ पुगेको छ । तीमध्ये पुरुष ३ सय ९९ र महिला ६८ जना रहेका छन् ।
उनीहरूमध्ये धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट १२ जना छन् । ती सबै झापाका हुन् । त्यस्तै, बाराका ३४ र महोत्तरीका एक जना छन् । बुटवल कोरोना अस्पतालबाट २७ जना डिस्चार्ज भएका छन् । उनीहरू रुपन्देही र कपिलवस्तुका हुन् ।
कोरोना विशेष अस्पताल दाङबाट बाँके बर्दिया र कपिलवस्तु र दाङका १० जना डिस्चार्ज भएका छन् । रौतहट गौरबाट सबै रौतहटका १८ जनाले कोभिड जितेर घर फर्किएका छन् ।
हवाई भाडामा भारी छुट